FIARA VAKY KODIARANA TAO MAEVATANANA : Tafakatra dimy ireo namoy ny ainy
Tafakatra dimy ireo namoy ny ainy nandritra ny lozam-pifamoivoizana niseho, 13 km tsy hidirana an’i Maevatanàna ny alahady hariva lasa teo iny, raha ny tatitra voaray farany omaly . 23 août 2019
Namoy ny ainy tao amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona omaly ny iray raha toa ka efa maty tsy tra-drano taorian’ny nitrangan’ny loza ny roa, ny roa hafa kosa efa maty tao amin’ny Hopitalin’i Maevatanàna ny alatsinainy teo. Fantatra tamin’ny angom-baovao azo hatrany fa mpandeha naratra iray sisa no tavela mitsabo tena ao amin’ny hjra raha toa ka efa lasa nody avokoa ireo naratra miisa 15 hafa namany .
Nandritra ny fitsidihana notanterahan’ny Talem-paritry ny Fitaterana Betsiboka Randrianarivony Narson azy ireo dia nanambara ity farany fa “ efa nahatontosa ny adidiny tamin’ireo mana-manjo sy ireo naratra avokoa ireo tompon’andraikitra mahefa miaraka tamin’ny tompon’ny fiara nahavanon-doza tao an-toerana izay tamin’ny alalan’ny famangiana, fanomezana fanampiana ary koa ny fanaterana ireo razana tany amin’ny toerana niaviany avy“ . Raha tsiahivina moa dia ny alahady lasa teo no niharan-doza ny fiara taksiborosy iray mpitatitra nampitohy an’i Mahajanga sy Maevatanàna. Vaky kodiarana no voalaza fa nitarika ny loza mahatsiravina tamin’ io fotoana io.